Noolaha Heterotrophic: maxay yihiin, astaamaha iyo muhiimadda | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Dabeecadda iyo nidaamka deegaanka waxaa jira noocyo badan oo nooleyaal ah iyo kala soocid ku xiran nooca cuntada. Midkood waa noolaha heterotrophs. Waa nooleyaal aad muhiim ugu ah isu dheelitirka deegaanka iyo silsiladda cuntada. Iyagu waa kuwa aan awood u lahayn inay soosaaraan cunnadooda waana inay ku quudiyaan noolaha kale ee nool.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato noolaha heterotrophic, astaamahooda iyo muhiimadda ay u leeyihiin nidaamka deegaanka.
1 Noolaha Heterotrophic
2 Kala soocista noolaha heterotrophic
3 Silsiladda cuntada
4 Muhiimadda nidaamka deegaanka
Dhanka cilmiga bayoolajiga, waxaa muhiim ah in la fahmo sida noolaha kaladuwan uu isu quudinayo. Halkan waxaa ku yaal daraasadda dheef-shiid kiimikaadka, maxay yihiin geeddi-socodka iyo fal-celinta soo saarta isbeddelka jirka ee jirka. Aagga dheef-shiid kiimikaadka, markaan tixraacno habka loo helo nafaqooyinka, waxaan kala saari karnaa laba geeddi-socod oo waaweyn iyo qaabab loo kala saaro noocyada nool; noolaha heterotrophic iyo autotrophic. Wadajir waxay ka kooban yihiin deegaan kasta iyo nidaam deegaan oo ay ku nool yihiin dhammaan kuwa jira.
Xusuusnow inaan baranayno hababka dheef-shiid kiimikaadka iyo shaqooyinka muhiimka ah ee nafaqada ee qaababka nolosha. Waxaan ka heli karnaa qaababkan nololeed noocyada kala duwan ee deegaanka, kuwaas oo u baahan tamar iyo kaarboon go'an si loo soo saaro loona sameeyo unugyadooda. Noolaha Heterotrophic waa kuwa aan cunadooda ka sameysan karin hagaajinta kaarboonka. Sidaas darteed, cunnadooda waxay ka timaaddaa qaadashada nafaqooyinka laga helo ilaha kale ee kaarboon dabiiciga ah sida arrinta dhirta iyo xayawaanka.
Nidaamka nafaqada ee noolahaani wuxuu koobayaa oo matalayaa dhammaan noolaha ku dhex jira maadada dabiiciga ah ee ay hore u sii sharaxeen noolaha kale. Tani waxay ka dhigaysaa iyaga oo aan awood u lahayn inay ka samaystaan ​​maaddadooda u gaarka ah maaddooyinka fudud ee aan dabiici ahayn. Xaqiiqdii waxaan ku dari karnaa ku dhowaad dhammaan xayawaannada ka yimaada naasleyda, kalluunka iyo shimbiraha, in kasta oo fungi, protozoa iyo bakteeriyada badankood ay sidoo kale ku jiraan kooxdan. Waa inaad falanqeysaa silsiladda cuntada si aad u aragto halka ay ku yaalliin.
Waxay yihiin macaamiisha aasaasiga ah, kuwa sare iyo kuwa jaamacadaha. Adiga oo cunaya isku-darka kaarboonka, noolahaas waxay awoodaan inay u isticmaalaan dhammaan tamarta ay u isticmaalaan koritaankooda iyo horumarkooda. Waxay sidoo kale u adeegsadaan qaar ka mid ah shaqooyinka bayoolojiga iyo taranka.
Kala soocista noolaha heterotrophic
Aan aragno waxa loo kala soocayo noolahaas:
Noolaha Saprobian: Iyagu waa wakiilada ugu muhiimsan ee kala-daadashada iyo dib-u-soo-celinta dhammaan waxyaabaha dabiiciga ah ee ka jira ciidda. Iyaga ayaa mas'uul ka ah soo nuugista nafaqooyinka noolahaas dhintay ama saxar ama mid ka mid ah qaybaheeda. Inta badan bakteeriyada, fungi, cayayaanka, gooryaanka, iwm. Waxay ka tirsan yihiin kooxdan.
Noolaha jajaban: waa kuwa ka soo nuugaya nafaqooyinka noolaha dhintay, ama saxarada ama mid ka mid ah qaybaheeda. Farqiga saprobes waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in isku-darka nafaqooyinka lagu fuliyo nuugista, waxay u baahan yihiin inay ruugaan ama gooyaan waxyaabaha nafaqada leh. Halkaan waxaan ka helnaa lamid ah, dixiriga, dirxiga duulaya, qajaarka badda, iwm.
Noolaha ugaarsiga: Iyagu waa kuwa ku quudiya dhammaan qaybaha noolaha. Halkaan waxaan ka helnaa libaaxyo, libaaxyo, gorgorro, iwm. Iyaga ayaa loo kala qaybin karaa noocyada soo socda: ugaadhsade: waa kuwa dila oo soo qabta wixii ay ugaadhsadaan. Scavengers: waxay mas'uul ka yihiin cunista noolaha si dabiici ah u dhintey ama ay kuwa kale calaamadeeyeen. Ku dul-noole: waa kuwa ka nuuga nafaqooyinka martida nool.
Noolaha Heterotrophic sidoo kale waa loo qaybin karaa iyadoo kuxiran nooca cuntada ay leeyihiin:
Wax walba iyagu waa macaamiisha quudisa dhirta iyo xoolahaba. Dabeecadaha wax cuna ayaa cuni kara wax kasta, sidaa darteed dhib yar ayey ku qabaan helitaanka nafaqooyinka.
Hilibleyda: waxay cunaan oo keliya hilibka. Tamarta waxaa laga helaa noolaha kale waxayna isticmaashaa dufanka jirkaaga ku keydsan.
Dhirta: cun dhirta iyo dhirta kaliya. Iyagu waa macaamiisha aasaasiga ah ee silsiladda cuntada.
Waxaan horay u soo sheegnay silsiladda cuntada waana mid muhiimad gaar ah leh marka la kala saarayo noolaha heterotrophic. Heerarka trophic-ku waxay ku saleysan yihiin kala-saarista noolaha oo ku saleysan asalka arrinta ay ku quudinayaan. Waxay sidoo kale ku tiirsan yihiin deegaanka ay ku nool yihiin. Qeybinta ugu weyn waxay kuxirantahay heerarka kuleylaha waxayna tixgelineysaa macaamiisha. Aynu aragno meesha xayawaanka heterotrophic laga helo iyo kala soociddooda:
Macaamiisha aasaasiga ah: waa xayawaan dhir udgoon leh oo ku quudiya noolaha autotrophic.
Macaamiisha dugsiga sare: Waa kuwaa xayawaanada hilibka cuna ee quudiya macmiilka aasaasiga ah.
Degreerayaasha: Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa inay yihiin kuwa wax dumiya waxayna mas'uul ka yihiin quudinta waxyaabaha dhintay. Waxay ka mid yihiin saprophagi iyo saprophytes.
Muhiimadda nidaamka deegaanka
Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii maqaalka, noolaha heterotrophic ayaa ahmiyad weyn u leh nidaamka deegaanka. Iyagu waa waxa ka dhiga meeraha mid aad u kala duwan oo noocyada kaladuwan ee kaladuwanaanta ku noolaan karaan nidaamyada kala duwan ee deegaanka iyo deegaanka dabiiciga ah. Waxay qayb ka yihiin silsiladda cuntada iyo waxay u dhaqmaan isweydaarsiga walxaha dabiiciga ah iyo tamarta.
Quudinta waxay dhacdaa marka unuga uu cuno walxaha dabiiciga ah ee horay loo sameeyay. Si kastaba ha noqotee, waxay u oggolaaneysaa u beddelashada cuntada in ay u noqoto arrin u gaar ah. Waa noolaha cuntada ka hela ka mid noqoshada noolaha kale, qaybahooda dhintay ama saxaradooda. Waxaas oo dhami waxay kuxiran yihiin kala soocii hore ee aan soo aragnay.
Halkaas waxaan ka kala saari karnaa noocyada nafaqada ee kala duwan:
Nafaqada Holozoic: Waa mid lagu kobciyo qabashada maareynta tooska ah ee qaababka kale ee nolosha. Tusaale ahaan, aadanaha, shabeelka, gorgorrada iyo libaaxyadu waxay leeyihiin nafaqo holozoic ah.
Nafaqada Saprophytic: waa noolahaas mas'uulka ka ah quudinta walxaha dabiiciga ah ee dillaacaya. Halkan waxaan ka helnaa koox ka mid ah boqoshaada, bakteeriyada, dirxiga, iwm.
Nafaqada noolaha: Waxaa lagu yaqaan magaca dulinka waxayna yihiin kuwa cuntada ka hela noolaha kale.
Sidaad arki karto, noolaha heterotrophic wuxuu door muhiim ah ku leeyahay nidaamka deegaanka. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto heterotrophs iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Heterotrophs: waxa ay yihiin iyo sifooyin
Maxaa lagu sameeyaa buugaag duug ah